Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » CNN ịhụnanya ọhụrụ maka Samsung: Ọ na-akwụkwa ụgwọ!
Ndị mmekọ CNN na Samsung maka mkpọsa zuru ụwa ọnụ na -enyocha ike dị mma nke teknụzụ
CNN International Commercial (CNNIC) ejikọtala na Samsung Electronics (Samsung) maka mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-egosipụta ike nke nkà na ụzụ iji wuo ọdịnihu dị mma ma nyere ndị mmadụ aka imeri nsogbu site na nkà na ụzụ ọhụrụ.
Site na usoro ihe nkiri akpọrọ 'Better Tech For All' na itinye aha ya na ntinye akwụkwọ akụkọ 'Tech for Good', mkpọsa ahụ ga -ejikọ Samsung na ndị na -ege CNN zuru ụwa ọnụ iji gosipụta ka ndị mmadụ siri jiri teknụzụ ọhụrụ nye onwe ha na obodo ha ike.
BTeknụzụ maka mmadụ niile ', usoro ọdịnaya akpọrọ aha nke CNNIC na-emeri ihe nrite zuru ụwa ọnụ Mepụta, na -eso otu isiokwu nke ihe ọhụrụ dị ịtụnanya na -enye ndị mmadụ ohere ime nke ọma na imeri ihe ịma aka site na teknụzụ. Ihe nkiri mbụ 'Jiri ịhụnanya bịanye aka na ya' atụmatụ David Cowan, onye ntụgharị okwu n'asụsụ ndị ogbi nke nyekwara aka na ọkwa ọkwa gọọmentị sitere na Georgia na US ma na-atụgharịrị ndị ntị chiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ. Ọ na-ekpughe otú nkà na ụzụ si mee ka ozi dịkwuo mfe ịnweta ma mee ka ndụ ndị ogbi dịkwuo mma. Dị ka akụkụ nke ntinye CNNIC maka nkwado, Mepụta esonyela na mgbasa ozi Ad Net Zero na nke a bụ ihe nkiri mbụ mepụtara ka ewepụta carbon na -anọpụ iche site na iji ihe mgbako carbon Albert iji belata akara ukwu carbon. Lelee nke a ihe onyonyo n'azụ ka ịmụtakwuo ka otu ndị na -emepụta ihe si gburugburu ụwa siri duzie ihe nkiri a na -akpali akpali.
n mgbakwunye, nke 'Tek for Good' usoro amalitela n'afọ nke abụọ n'usoro, na mmekorita ya na Samsung. Onye na-akwado CNN anchor na onye nta akụkọ Kristie Lu Stout, oge nke abụọ nke 'Tek for Good' bidoro na Julaị afọ a wee mejupụta nkeji iri atọ na nkeji iri atọ ruo na Nọvemba gafee CNN International TV, yana ọdịnaya ndị ọzọ na nyiwe dijitalụ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-enyocha otú teknụzụ si enyere ma ndị mmadụ ma ọha mmadụ aka n'ihe niile site na agụmakwụkwọ ruo na nkwado.
"Ọ bụ ihe ùgwù mgbe niile iso onye isi ụlọ ọrụ dị ka Samsung na-emekọrịta ihe na-akpali akpali nke na-egosipụta ike teknụzụ," Rob Bradley, Onye isi oche onye isi oche, CNN International Commercial. "Iwe ike ịkọ akụkọ dị mma site na iji nghọta data na nyocha na-eme ka ọ bụrụ ihe ngwọta ọhụrụ nke ga-ejikọta ụdị na ndị isi na-ege ntị gburugburu ụwa. Anyị na -atụ anya mmekorita a na -akpali ndị na -ege CNN ka ha chee maka ọdịnihu ma melite ndụ ndị ọzọ site na imepụta teknụzụ ka ọ dị mma. ”